Ngwaọrụ ọgwụ na APICMO maka CMO / CDMO Intermediates
Obere ọnụ ọgụgụ & Nhazi usoro ntanetị
Ọrụ APICMO sitere na milligrams iji tụọ ụda mmepụta ihe
Ụdị ọrụ APICMO
anyị na-etinye aka n'ichepụta ngwaahịa dị elu na cGMP maka ngwaahịa ndị ahụ iji hụ na ọrụ na ngwaahịa na-agbaso ụkpụrụ kachasị mma.
APICMO bụ ụlọ ọrụ ọgwụ na-emepụta ndị na-emepụta ọgwụ ọhụrụ. Ọ na-elekwasị anya n'ịnye usoro zuru ezu nke ọrụ mmepụta ihe na nke a haziri ahazi maka ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ mmepe na ụlọ ọrụ ọgwụ.
Gbasara APICMO BIOCHEMICAL INC.
APICMO bụ ụlọ ọrụ na-ere ọgwụ na-ahụ maka ndị na-emepụta nchọpụta ọhụrụ maka nchọpụta ọhụrụ na mmepe nke oncology, na-enye usoro mmepe, mmezi nke mmepụta ihe, mmepụta ihe na ọrụ ndị ọzọ maka ịme ọgwụ na mmepe ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọgwụ; APICMO na chemical, biologically intermediates derived pharmaceutical, APIs na iwu Mmepe nke kemịkal, njikwa mma, arụ ọrụ cGMP, oru ngo, na ahịa nwere ezigbo uru.
APICMO nwere otu ndị R & D siri ike na ndị ọkà mmụta sayensị nwere ahụmahụ - Dr. Anyị nwere nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ azụmahịa. Ndị APICMO na-elekọta ndị otu na-esite ná mba ndị mepere emepe dịka United States, Europe na Japan. Ihe karịrị afọ 10 nke ụlọ ọrụ na-ahụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụ. Mgbe ihe karịrị afọ iri nke nchịkọta ahịa, APICMO nwere isi ihe dị mkpa nke imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọgwụ.
Gbasara Gbasara Anyị
APICMO na-enye ọrụ ndị metụtara ya bụ ndị iwu anyị siri ike na-akwado na Nchebe Intellectual Property (IP), iji hụ na a na-edozi ọrụ ndị ahụ n'ọnọdụ nzuzo kachasị sie ike.
N'afọ ndị gara aga, APICMO nọ na-enye usoro ahaziri ahaziri iche na ọrụ nsị. Ọrụ anyị sitere na milligram obere batch na tọn nke nnukwu ọrụ n'ichepụta ọrụ.
APICMO maka nchọpụta ọgwụ ọjọọ bụ ngwọta na-esi ísì ọjọọ, nke na-enyocha ihe ọmụma sayensị na data iji gosipụta ihe ndị a na-amaghị na njikọ zoro ezo nke nwere ike inye aka mee ka ọganihu nke sayensị dịkwuo elu.
Ndị ọrụ anyị na-ahụ maka mmepe ahụ, gụnyere ndị ọkà mmụta sayensị 50 na China, bụ nke karịrị ihe atụ karịa ọrụ ndị siri ike, na-arụ ọrụ n'ime ụlọ akwụkwọ ntanetị nke ọgbara ọhụrụ nke usoro nhazi ọhụrụ na nyocha.
A Na-atụkwasị Anyị Obi Site Ndị Ụlọ Ọrụ Na-eduzi Ụwa
2016. AIMS BY AHARATORIES AWARDS
Uzo na nyocha ihe omuma nke steroidal sulfuric acid paper sodium and oxime composites with antitumor activity.
2018. Ihe kacha mma
Ọrụ ọrụ: site na milligrams ruo ọtụtụ narị kilograms. Anyị nwere otu ndị na-eme egwuregwu nke ndị òtù 10, ndị na-elekọta ahịa n'ozuzu, na-eme nchọpụta na ngwaahịa dị iche iche dị iche iche yana ndị ahịa ngwaahịa China, ngwaahịa nkọwa, wdg.
06 / 05 / 20190 amasị
08 / 30 / 20180 amasị
08 / 28 / 20180 amasị
08 / 18 / 20180 amasị
07 / 19 / 20181 Comment0 amasị
Gwakwa ọla kọpa ahịa & mgbasa ozi
07 / 18 / 20181 Comment0 amasị
Zhaosen Zeng Ph.D. akwụkwọ eji achọ ọrụ
07 / 18 / 20182 Comments0 amasị
Onu ogugu akwukwo ocha kacha mma
Ịtụkwasị Obi na Iguzosi Ike n'Ihe.